ထက်တည်မြင့် ● ခေါင်းစဉ်လည်း ခေါင်းချစရာမရှိတော့ …. | MoeMaKa Burmese News & Media
ထက်တည်မြင့် ● ခေါင်းစဉ်လည်း ခေါင်းချစရာမရှိတော့ ….
ကြိုးပြတ်နေတယ် ။ ။
ညိုထက်ညို – နံနက် ငါးနာရီ https://t.co/ObRxphJ1EN https://t.co/VrkyZ0uBjC about 17 minutes ago ReplyRetweetFavorite